Global Voices teny Malagasy » Ny Vaovao Farany Momba Ny Olan’ny Farihy Urmia Ao Iran · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Avrily 2015 3:21 GMT 1	 · Mpanoratra Iran Voices Nandika avylavitra
Mijery ireo ezaka natao tato ho ato hamonjena ny farihy Urmia ny “Iran Voices”, iray amin'ireo farihy mangidy sira lehibe indrindra eran'izao tontolo izao. Sary avy amin'i Davood Ghardar ho an'ny “ISNA News”. Sary navoaka ho ampiasaina indray.
Tao amin'ny IranVoices.org  no nivoaka voalohany ity lahatsoratra ity ary nadika ho teny Anglisy sy navoaka eto noho ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
“Manome toky anareo aho fa raha voafidy ho filohan'ny rantsana mpanatanteraka, dia hanomboka hiasa hanavotra ny Farihy Urmia dieny amin'ny andro voalohany,” hoy i Hassan Rouhani, filoha Iraniana, niteny  nandritry ny fampielezan-keviny ho amin'ny fifidianana.
Eny tokoa, lasa zavatra iray ao anatin'ny olan'ny firenena ny Farihy Urmia. Ity farihy ity no iray amin'ireo farihy lehibe indrindra eran'izao tontolo izao ahitàna rano masira, any amin'ny tendro avaratra andrefan'ny firenena, akaikin'ny sisintany Tiorka, eo anelanelan'ny faritanin'i Azerbaijana Atsinanana sy Andrefana, ary ampahany amin'ny avaratr'i Kurdistan. Ireo mpikaroka avy amin'ny “Journal of Great Lake Research” (Gazetim-Pikarohan'i Great Lake) dia nilaza  fa amoron-tevan'ny fahasimbana ara-tontolo iainana ilay farihy. Ny sisiny manamorona an'i Urmia dia efa lasa nisintona lalina any anatin'ny faritry, ka loza mananontanona ho an'ny firindran'ny fiainana ao aminy. Ity lahatsary eto ambany ity no maneho ny fiovàna henjana teo anelanelan'ny Oktobra 1972 sy Aogositra 2014.
Ny Aogositra 2013, nandritry ny fivoriana voalohany nataon'ny kabinetrany, napetrak'i Rouhani ny vaomiera iray handinika ilay olana. Ny minisitry ny angovo no mitarika ilay vaomiera, raha ireo mpikambana hafa kosa ahitàna ny minisitry ny fambolena, ny atitany, ary ny Fikambanana ho Fiarovana ny Tontolo Iainana. Ireo ezaka hafa dia ahitàna ny fandraisana andraikir'ireo  faritany telo voakasik'izany, ny Departemanta momba ny tontolo iainana ao Iran ary ny Fandaharan'asan'ny Firenena Mikambana Ho an'ny Fampandrosoana (PNUD) mba hikatsahana vahaolana ho ampiharin'ny governemanta. Fivoriana iray natao tamin'ny Martsa 2014  teo amin'ireo hery rehetra ireo no niafara taminà teboka 11 ho tanterahana, handraisan'ireo andrim-panjakana samihafa ao amin'ny governemanta ao Iran anjara, tafiditra amin'izany ny fanentanana iray hanerana ny firenena manontolo. Ny ezaka hafa dia ahitàna ny fanolorana 2 tapitrisa dolara nataon'ny governemanta Japoney ho an'ny PNUD ao Iran  hanampiana ny famerenana amin'ny laoniny ilay farihy (navaozina tamin'ny Martsa lasa teo  ny ampahany faharoa taminìilay fanampiana).
Ny fanamarihana akaiky indrindra momba ny toe-draharaha mahakasika ny farihy Urmia dia avy amin'ny loholon'ny fiarovana ny tontolo iainana ao Atsinanan'i Azerbaijan, Hamid Ghasemi, izay niteny tamin'ny masoivohom-baovao ISNA hoe : “Ny salanisan'ny rotsakorana tao amin'ilay faritany hatramin'ny niantombohan'ny volana Mehr (tapaky ny Septambra) dia 215.3 mm” [mandra-pahatapitry ny Esfand, na tapaky ny Martsa], raha ampitahaina amin'ny rotsakorana 117.1mm tamin'ny taona lasa”
Na teo aza ny fitomboan'ny rotsakorana, nomarihan'i Ghasemi fa tsy nanova ny haavo sy ny hadirin'ny rano tao amin'ny farihy izany raha miohatra aminìny taona teo aloha. Notsindrian'i Ghasemi fa ny fomba irosoana mankany amin'ny “fanatsaràna ny haavon'ny rano” dia miankina amin'ny fitomboan'ny rotsakorana manerana ireo sakelidrano mameno ireo tohodrano lehibe ao amin'ny faritra. Nomarihany ihany koa ny maha-zava-dehibe ny fanaovana fanentanana momba ny toe-draharaha ao amin'ilay farihy ho an'ireo vohitra eny an-toerana manakaiky ilay farihy, fametrahana ireny fanentanana ireny amin'ny fitenin'ny ao an-toerana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/04/08/69009/
 napetrak'i : http://www.radiofarda.com/content/f35_iran_gov_urmia_lake_recovery/25079200.html
 fandraisana andraikir'ireo: http://www.ir.undp.org/content/dam/iran/docs/Publications/E&SD/WIRT%20Conclusions%20and%20Recommendations.pdf
 fanolorana 2 tapitrisa dolara nataon'ny governemanta Japoney ho an'ny PNUD ao Iran: http://www.ir.undp.org/content/iran/en/home/presscenter/articles/2015/02/11/undp-iran-releases-video-on-lake-urmia.html
 Martsa lasa teo: http://un.org.ir/index.php/response-development/response-environment/1102-18-mar-2015-iran-japan-and-the-un-combine-forces-to-preserve-lake-urmia
 masoivohom-baovao ISNA hoe: http://isna.ir/fa/news/93122916271/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87